Product Model: CM_NIB_230
‘पुँजीवाद र नेपाल’ आजको नेपाली समाजमा पुँजीवाद र यस्को प्रवृत्ति र स्वरुप बुझाउने कसरत हो । आजको नेपाली समाजमा पुँजीवादको स्वरुप कस्तो छ ? यसका व्यवहारहरु कस्तो छ ? नेपाली समाज मुलतः पुँजीवादी समाज हो कि होइन ? हो भने कसरी हो, होइन भने यस्को स्वरु...
Tags: punjibad ra nepal chaitanya mishra
Author Chaitanya Mishra
Book Name Pujibad Ra Nepal
‘पुँजीवाद र नेपाल’ आजको नेपाली समाजमा पुँजीवाद र यस्को प्रवृत्ति र स्वरुप बुझाउने कसरत हो । आजको नेपाली समाजमा पुँजीवादको स्वरुप कस्तो छ ? यसका व्यवहारहरु कस्तो छ ? नेपाली समाज मुलतः पुँजीवादी समाज हो कि होइन ? हो भने कसरी हो, होइन भने यस्को स्वरुप कस्तो छ ?, मुख्यतः यस किताब यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित छ । नेपाली समाजको विषयमा गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान गरेर पुँजीवादी स्वरुप र यसको बढ्दो प्रभावको विषयमा यस किताबले धेरै विषय ओगटेको छ । जुन अध्ययन र अनुसन्धानको निमित्त सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छ ।